Xukuumadda Oo Ballan Ku Qaadey In Qof Aan Haysan Kaadhka Dhalashadu Aanu Ka Shaqeysan Karin Somaliland | Somaliland Today
← Geerisa: Dad Looga Shakiyey Inay Ku Sumoobeen Cunto Gawaadhi Looga Daadiyay
Midowga Yurub Oo Eegaya Xaaladda Bani-aadaminimo Ee Deegaannada Kooxda Khaatumo Ka Waddo Dhibaatada →
Xukuumadda Oo Ballan Ku Qaadey In Qof Aan Haysan Kaadhka Dhalashadu Aanu Ka Shaqeysan Karin Somaliland
(SLT-Hargeysa) – Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Cali Maxamed Waran-cadde oo dalka dib ugu soo laabtay kaddib socdaal uu ugu maqnaa dalalka Imaraadka Carabta oo uu kaga qayb-galay sida uu sheegay shirar lagaga hadlayay dhismaha Ciidanka Ilaalada Sahamiyeyaasha Shidaalka ee Shirkaddaha heshiiska kula jira Xukuumadda loogu talo-galay, ayaa markii uu madaarka ka soo degay waxa uu si adag uga hadlay mashruuca mad-madowgu hadheeyay ee Diwaan-gelinta Medeniga ah.
Cali Waran-cadde oo shalay ka soo degay Madaarka Hargeysa, ayaa meesha ka saaray isagoo dhoola caddeynaya, inay fashilantay Diwaan-gelinta Medeniga ah ee Wasiirraddiisu dalka ka wado, taasoo ay Asxaabta Siyaasaddu daboolka ka qaaday inay kashifantay oo dan gaar ah laga leeyahay.
Waxaanu Wasiir Waran-cadde sheegay in dhaliilaha Mucaaridku ay yihiin Afka baarkiisa, wax ka xaqiiqoobayaana jirin doonin, isagoo xusay in qofkii bishan gudaheeda qaadan waaya teesarada dhalashadu uu waayi doono dhamaan xuquuqiyaadkiisa aasaasiga ah iyo xoriyadkiisa qaybo ka mid ah.
“Diwaan-gelintu way soconaysaa way soconaysaa, wax fashilmay oo jiraana ma jiraan, mana ogi, bishan gudaheedana waxaan wareegto ku soo saarayaa inaan qof bilaa kaadh ah, Magaalada dhex mari Karin, Lacag ka qaadan doonin xawaalad, Gaadhi kaxaysan doonin, liisan Gaadhi la siin Karin” ayuu yidhi Waran Cadde.
Waxaanu intaas ku daray “Waxaan hada amray in la sameeyo xero weyn oo Gawaadhida laga dhigo dadka bilaa teesarada ah. – “ xeradaas ayaanu u diyaarinay, waxa kale oo aan diyaarinay meel lagu xidho dadka lagu qabto inay laba jeer isdiwaan-geliyeen oo lagu soo saari doono kala-shaandheynta Server-ka” ayuu ku hanjabay Cali Waran-cadde.
Hadalkan Wasiirka, ayaa ku soo beegmay, isla shalay oo Guddoomiyaha Xisbiga Ucid Eng. Faysal Cali Waraabe Waraysi uu siiyay Wariyeyaasha ku sheegay in Diwaan-gelinta Medeniga ahi tahay mashruuc dadka lagu jahawareerinayo.
Faysal Cali Waraabe ayaa tilmaamay in Mashruucaasi fashil ku dhamaan doono.
Asxaabta mucaaridka ah ayaa dhawaan Ogolaaday Diwaan-gelintan in la sameeyo, isla markaana goleyaasha Xeer-dejintu aqbalaan hindise sharciyeedka xukuumaddu u dejisay ee ku lamaaneeyay Diwaan-gelinta codbixiyeyaaasha.
Ogolaanshiyaha labada Xisbi Mucaarid ayaa ka dambeysay muran hadheeyay saaxada siyaasadda oo muddo laysku mari la’aa in la qabto Diwaan-gelinta Jinsiyadaha iyo Codbixiyeyaasha, labadaasoo ay Mucaaridku diidmo qayaxan kala horyimaadeen, iyagoo ku doodaya inuu caqabad ku keenayo Doorashooyinka.
Diwaan-gelin Habaqle ku socota.
Diwaan-gelinta Wasiir Waran-cadde Difaacay oo dalka ka bilaabantay Bishii August dabayaaqaddeedii, ayaa ku socota hab habaqle ah oo aanay Bulshada iyo saxaafaddu toona indhaha ku haynin.
Dadka ayaa Goobaha layska diwaan-gelinayo safaf aad u yar subaxii ilaa gelinka dambe ku jira, waxaanad dareemaysaa inaan dadka badankiisu wax macno samaynaya u arag howshan socota.
Sababta keentay Habacsanaanta Diwaan-gelintu ku socoto, ayaa loo aanaynayaa dhowr arrimood, balse waxa ugu muhiimsan fahan la’aanta mujtamaca ee diwaan-gelinta.
Ma jirto wacyi-gelin dadka loogu gudbiyay fariimo ku aadan qaadashada kaadhka Jinsiyada, marka la tago barmaamujyo dhawaanahan lagu soo kordhiyay Warbaahinta dawladda oo aanay dadku inta badan dhegeysan ama la socon Barmaamujyada ka baxa, taasoo hadana ay Itaalka Xukuumaddu isleedahay bulshada ku gaadhsii wacyi-gelin ku saabsan barmaamujka diwaan-gelinta muwaadinka ee socda.
Sidoo kale, dadka qaar ayaa aaminsan inay saameyn ku yeelanayso, Kamarada Isha dadka lagu sawirayo ee ka midka ah qalabka loo adeegsanayo diwaan-gelinta, “qofkii doonaya inuu u dhoofo wadamada yurub iyo dalal kale ee adduunkaba, waxa la helayaa sawirkiisa indhaha, hadii uu isdiwaan-geliyo” ayay dadka qaar aaminsanyihiin.
Si kastaba ha ahaatee waxa iska cad inaanay is lahayn, kala haabna ay yihiin, Hanjabaada Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland jeediyay iyo sida ay howsha uu maamulayaa u socoto ee habaclaha ah.